Amakhasino aphezulu ayi-10 e-Windows - Amakhasino aku-inthanethi ahamba phambili we-Windows - Amakhodi weBhasino Aku-inthanethi
I-10 ye-Windows Casinos ephezulu-I-Casino e-Best ye-Windows e-inthanethi
(343 amavoti, isilinganiso: 5.00 out of 5)
Iyalayisha ... Ngokusungulwa kwamakhasino eselula, abantu namuhla batende ukudlala imidlalo eminingi yekhasino ekuhambeni. Lokhu kungenzeka cishe kuwo wonke amafoni ahlakaniphile, amafoni omdala asephambilini namathebhulethi anokuxhumeka kwe-intanethi. Ngisho noma amadivaysi eselula asebenzayo Apple iOS, Android futhi I-Blackberry OS zithandwa kakhulu ngokudlala imidlalo ye-casino ekuhambeni, iMicrosoft inike impendulo kubo bonke ngokudala Windows Phone OS, isistimu yokusebenza yocingo ephathekayo evuselele ngokuphelele i-Windows Mobile endala. Ama-casino e-Windows afakwe amandla yilo hlelo lokusebenza olukhulu nakumadivayisi we-Windows Phone uhlelo luhlanganiswe nezinye izinhlelo ze-Microsoft namasevisi. Lokhu kusho ukuthi inesikhathi esisheshayo esabelayo uma kuqhathaniswa nezinye izinhlelo zokusebenza ezihamba phambili. Funda lesi sihloko esijulile ukuze ufunde kabanzi mayelana nesistimu yokusebenza kanye namakhasino e-Windows eselula kanye nemidlalo yekhasino efanelekayo kula madivayisi.
Awekho izinhlelo zokusebenza ezihlelekile ze-Windows OS okwamanje ngakho kufanele unamathele ngenguqulo elula yeselula njengo-SpinPalace enikezayo. Ngenye yezinkinobho ezinhle kunazo zonke futhi wasebenza kanzima ukuthuthukisa isipiliyoni sabo sokudlala eselula.
Uhlu lwe-10 ephezulu ye-Windows Mobile Casino Sites
I-Windows Phone OS ne-Casinos yeselula
Isistimu yokusebenza ye-Windows Phone OS yenza amadivayisi amaningi aphathekayo afana namathebhulethi, amafoni ahlakaniphile nama-PC Pocket. Imidlalo yama-casino yeselula edlalwa kumafoni e-Android, i-Blackberry ne-iPhone athuthukile phambili ngokuthandwa, kodwa inguqulo yakamuva ye-Windows Phone eyenza i-Windows Phone 7 ne-Windows Phone 8 amakhasino, ibuyisele iMicrosoft phambili kwezobuchwepheshe bezokudlala. Lolu hlelo lokusebenza luyatholakala ngenani lamanethiwekhi ephathekayo njengamamodeli we-HTC ne-Samsung. I-Windows Phone OS ibuye isekele izikrini eziningi zokuxhumana kanye nezinqubo ezihamba phambili zamaselula nokudlala imidlalo ye-casino yeselula kuyo imnandi kakhulu futhi iyabangalisa. Le midlalo iboniswa ngehluzo eziphezulu zekhwalithi futhi zinikeza isipiliyoni esihle sokudlala esimangalisayo ekuhambeni.
Yiziphi Windows Mobile Casinos?
Ama-casino ephathekayo e-Windows ama-casino lapho edlalwa kumadivayisi weselula namathebulethi anikwe amandla yi-Windows Phone OS. Ebizwa nangokuthi i-Windows Phone casinos, la makhinethi afana namakhasino ase-intanethi ngezindlela eziningi.
Omunye ukufana enkulu wukuthi lezi amakhasino abadlali Dala ama-akhawunti, imali yekhasino kanye Ukuzihoxisa futhi kuseyingxenye ukwazi ukufaka isicelo amabhonasi kanye jaha izikhundla. I-casino mobile Windows nazo ilayisensi futhi kulawulwa izindawo ukugembula futhi ngoba eningi ukuthenga olwenziwa, banikela engcono izinketho nephephile baking kubadlali. Izinyathelo eziphephile ezisebenzisayo ukuvikela abadlali nazo zingenye yezindlela ezihamba kahle embonini yeselula.
Noma kunjalo, uma kuqhathaniswa namakhasino e-intanethi, i-Windows Phone casino ivumela abadlali ukuthi bathathe ukugembula kwabo kwekhasino noma kuphi lapho behamba khona futhi badlale imidlalo nganoma isiphi isikhathi. Ukuhleleka kwabo yilokho okwenza bahle kakhulu. Ngenxa yokuthi lezi zinkinobho ziphathekayo, abadlali bangadlala i-video poker, izintambo kanye neminye imidlalo ye-casino ngokuqondile kumafoni akhe noma amaphilisi. Injabulo yokuwina imali kule midlalo ngenkathi ilinde ukuqokwa akukaze ibe mkhulu.
Imidlalo ye-Casino ye-Windows Phone
Ngisho noma kungumkhuba wakamuva, ukugembula komakhalekhukhwini kunamaphuzu athile. Enye yayo ukungabi nemidlalo ehlukahlukene. Uma kuqhathaniswa namakhasino e-intanethi kanye nokukhethwa kwawo kwemidlalo, amakhasino omakhalekhukhwini ngokuvamile anezinsizakalo ze-casino ezincane. Noma kunjalo, kuneziqu eziningi ongakhetha kuzo.
Imidlalo yasekhasino yeWindows Phone ikakhulukazi ifaka izinhlobo ezahlukahlukene zemidlalo yama-slot nezinhlobonhlobo ezincane zemidlalo yetafula neyevidiyo futhi ezinye izihloko zifaka ama-Classics anjenge-roulette ne-blackjack, izindawo ezaziwayo ezifana ne-Thunderstruck neMega Moolah kanye neyona ethandwa kakhulu i-video poker ehlukile amaJacks noma angcono. Imidlalo enikezwayo nekhwalithi yabo kanye namahluzo kuncike kumhlinzeki wesoftware we-casino.
Imidlalo ye-Windows mobile yasekhasino ingadlalwa kokubili ngemali yangempela futhi mahhala. Imidlalo yasekhasino yamahhala yeWindows Phone ikuvumela ukuba uthole amakhono, wenze amasu okubheja futhi uzijwayeze nekhasino. Ukuze unciphise ukukhetha, imidlalo ephezulu yasekhasino ye-10 yama-Windows Phone yizihloko zePlaytech ezinjengeGolide Rally, iFrankie Dettori's neRoulette yaseYurophu kanye neMelika kanye nezihloko zakwaMcirogaming ezifana neMajor Million, Avalon, Mega Moolah, Mermaid Million, Tomb Rider kanye neBlackjack. Imidlalo iyajabulisa ukuyidlala futhi uma usuzizwa uqiniseka, ungadlulela phambili uyidlalise ukuthola imali yangempela.
I-Windows Phone Casino App
Ukudlala imidlalo ye-casino yeselula ye-Windows noma yikuphi futhi nganoma isiphi isikhathi, abadlali kudingeka balande uhlelo lokusebenza olufanele lwe-casino oluhambisana ne-Windows Phone. Lokhu kungenziwa ngezindlela ezimbili. Okokuqala, abadlali bangathola uhlelo lokusebenza lwe-Windows Phone casino ngokuqondile kwi-casino e-intanethi ngokufaka inombolo yabo yeselula. Emva kwalokho, bayothunyelwa isixhumanisi sokufaka futhi badinga ukulandela imiyalelo.
Okwesibili, bangathola uhlelo lokusebenza ngokuskena ikhodi ye-QR, uma kutholakala kuwebhusayithi ye-casino e-intanethi. Uma nje beskena ikhodi badinga ukulandela izinyathelo ezilula bese ufaka ikhasino. Imali yangempela I-Windows Phone casino idinga idiphozi ukuze idlale imidlalo, ngakho-ke, khetha ukhetho olufanele lwebhange ekunikezeni futhi wenze idiphozi. Bese uhamba phambili emidlalweni yakho yezintandokazi ze-casino bese uqala ukuwina imali yangempela.
Okokugcina, amanye amakhamera e-Windows Phone enza umsebenzi we-HTML5 ngaphandle kokulanda uhlelo lokusebenza. Ngokwesibonelo, Windows Phone 7 ephinde usebenza nge HTML5 evumela abadlali vele uvakashele yekhasino mobile ngokuthayipha e-URL isiphequluli sewebhu. Ukudlala imidlalo, badinga ukudala i-akhawunti, ukungena ngemvume, ukwenza idiphozi bese uqala ukudlala.
0.1 Uhlu lwe-10 ephezulu ye-Windows Mobile Casino Sites
2.1 I-Windows Phone OS ne-Casinos yeselula
2.2 Yiziphi Windows Mobile Casinos?
2.3 Imidlalo ye-Casino ye-Windows Phone
2.4 I-Windows Phone Casino App